सफल मान्छे के गर्छन् ? Globe Nepal News Portal
देवेन्द्र प्रताप शाह/
एक सफल मान्छेको दिनचर्याको एउटा पक्ष तलको लिष्टमा समावेश छ । मान्छेको व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाउन समेत यो लिष्टले मदत गर्ने बताइएको छ । तपाईलाई के लाग्छ होला ? प्लिज बताउनुस न है !
• व्यायामः कोही मान्छे बाहिरबाट सफल देखिन्छन्, धन कमाएका होलान्, पद प्राप्ति गरेका होलान्, तर सफलताको सुचकाङ्क यतिमै सीमित छैन । धन र पद मात्र सबै थोक त हैन । उसको दिनचर्यामा व्यायाम पर्छ कि पर्दैन, यो निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यायामको फाइदाको बारेमा धेरै भन्न नपर्ला, दैनिक कम्तीमा आधा घण्टाको व्यायामले शरीरमा ल्याउने फुर्ति बेग्लै हुन्छ । व्यायामबाट हुने स्वास्थ्य सम्बन्धि फाइदाहरुको त हिसाबै छैन । भनिन्छ, व्यायाम नै सबै भन्दा ठुलो र पैसा खर्च गर्न नपर्ने प्रभावकारी औषधी हो । सफल मान्छेहरु दैनिक व्यायाम गर्छन् ।
• स्मरणः सफल मान्छेले हरेक दिन त्यस दिनको आफ्नो अनुभव र आफुबाट भएको सकारात्मक कामहरुको स्मरण गर्ने बानी बसालेका हुन्छन्, किनकि ती सबै चिज बिर्सिनको लागि त हुँदैनन् । आफ्नो सफलता वा असफलता र भुलबाट सिक्ने यो नै उत्तम तरिका हो । स्मरण गर्न सजिलो होस भन्नका लागि हिडाइमा निस्किन सकिन्छ, ध्यानमा बस्न सकिन्छ वा सम्झिने अरु कुनै तरिका अपनाउन पनि सकिन्छ । यसले भविष्यमा जीवनमा सही निर्णय गर्न सहयोग पुग्ने बिश्वास गरिन्छ ।
• नेटवर्क बनाउनुः मानिसको लागि मानिस नै सबै भन्दा ठुलो चिज हो । यसैको लागि नेटवर्किङ, (चिनजान, सम्पर्कमा रहनु) जरुरी छ । आजकलका सफल मान्छे हरेक दिन कसै न कसैलाई इमेल लेख्छन्, आफुले पढेको कुनै लेख साथीको रुचि अनुसार पठाइदिने बानी उनीहरुको हुन्छ । यस्ता नेटवर्किङबाट कालान्तरमा फाइदा आफैलाई हुन्छ । इमेल पाउने ती मानिसहरु प्रसन्न हुन्छन्, र उनीहरुले पनि त्यसै गर्न सक्छन् । भनिन्छ, सफल मानिसहरुले एक आपसमा सम्पर्कका लगि शक्तिसाली नेटवर्क बनाएका हुन्छन् ।
• आफ्नो बानी वा शीपको लागि समय दिनुः कसैको कुनै पनि बानी वा शीपलाई सामान्य मान्न हुँदैन । त्यसैबाट उसले कुनै बेला ठुलो फाइदा लिन सक्छ, तर आफ्नो बानी वा शीपलाई एकातिर पन्छाएर बा बिर्सिएर अरु नै क्षेत्रमा काम गरिरहेको भएमा त्यस्तो फाइदाबाट ऊ सधैँको लागि बञ्चित हुन्छ । त्यसैले सफल मान्छेहरु आफ्नो त्यस्तो बानी वा शीपको लागि कममा पनि दिनको आधा घण्टा खर्च गर्छन्, यसबाट केही बर्षमै उनीहरुले ठुलै लाभांस हात पर्न बेर हुँदैन । उदाहरणको लागि कसैको गाउने वा बजाउने, बगैचाको अभिरुचि लिने वा केही लेख्ने वा अन्य कुनै वानी हुन सक्छ । त्यस्तो शीप वा बानीको परित्याग गर्न हुँदैन । यस बाहेक कुनै नयाँ क्षेत्र वा नयाँ शीपको लागि समय दिनु पनि नराम्रो होइन । हरेक दिन थोरै मात्र समय दिदा पनि केही महिना वा बर्षमै नयाँ शीपको बारेमा धेरै थाहा हुन्छ । यसबाट मान्छेलाई सुखि बनाउन मदत गर्छ र व्यक्तिगत उन्नतिको लागि ढोका खुल्न सक्छ ।
• पर्याप्त सुत्नुः कोही भन्छन्, थोरै सुतेर मान्छेले आफ्नो उत्पादकत्व बढाउन सक्छ, तर वास्तवमा त्यस्तो हैन । मान्छेले आफुलाई चाहिने जति सुत्नु पर्छ जुन दिनको ७ देखि ८ घण्टा हुन सक्छ । भनिन्छ, पर्याप्त सुताइले हाम्रो दिमागलाई रिचार्ज गर्छ र दिन भरिमा पाइएको सुचना वा जानकारीलाई विश्लेषण वा प्रसोधन गर्ने काममा सहयोग पुर्यायउँछ, र यसबाट अन्ततोगत्वा मान्छेले आफ्नो जीवनलाई राम्ररी ब्यबस्थापन गर्न सक्छ । सफल मान्छेमा यस्तो लक्षण हुन्छ ।
• आफुसँग भएको चिज प्रति कृतज्ञ हुनुः सफल मान्छेहरु आफुसँग भएको चिज प्रति कृतज्ञ हुन्छन् । यो नै सफल मान्छेहरुको सुखको श्रोत भइदिन्छ । त्यति मात्र हैन, यसबाट जीवन बिताउनका लागि मान्छेलाई उर्जा र जाँगर मिल्छ । उर्जा र जाँगर मान्छेको जीवनमा नभइ नहुने तत्वहरु हुन्, यसमा त केही लेख्न नपर्ला । अर्को कुरा, आफुसँग भएको चिजमा कृतज्ञ हुँदा जीवनमा खराब समयबाट गुज्रिन पर्दा पनि मान्छेलाई त्यसको ब्यबस्थापन गर्ने तागत प्राप्त हुन्छ ।
• असुबिधामा बस्न सिक्नुः सफल मान्छेहरु जोखिम मोल्न तयार हुन्छन् र चुनौतिलाई स्वीकार्छन् । मान्छेले हरेक दिन कुनै न कुनै समयमा सुविधाको जीवनबाट बाहिर आएर केही गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ । सधै सुबिधै सुबिधामा बस्नु एकदमै खतरनाक हुन्छ । सुबिधाबाट कहिलेकाहीँ बाहिर आउँदाका धेरै फाइदाहरु छन् । यसले जोखिममा परिदा मान्छेलाई कम्फोर्टेवल हुन सिकाउँछ, मान्छेको मनमा आउने पीडाको भावलाई कम गराउँछ, कडा समय बिताउन पर्दा सहन सक्ने क्षमताको विकास गरिदिन्छ । हामीलाई थाहै छ, जीवनमा दिनहरु सधै राम्रा आउँदैनन्, हरेक अवस्थालाई सहेर जान सक्नु नै जीवनको आवश्यकता हो । सहने शक्ति असुबिधाहरुसँग जुधेर नै प्राप्त हुन्छ । यस्तो काम आजैबाट शुरु नगर्दा ढिला हुन्छ ।
• अध्ययनः सफल मान्छेहरु सधै सिक्न प्रति लालायित हुन्छन् । यसको लागि हरेक दिन पढ्नमा केही समय बिताउन आवश्यक हुन्छ । पढ्ने चिज किताबै मात्र हुदैन, रेडियो वा टिभिबाट नयाँ कुरा देख्ने र सुन्ने, स-सानो लेख पढ्ने काम पनि गर्न सकिन्छ । यसबाट मान्छेको दिमागी भिजन फराकिलो हुन्छ, गहिराइमा पुगेर सोच्ने वानी विकास हुन्छ । ज्ञान मात्र बढ्ने हैन,यसले मान्छेमा विश्लेषणात्मक क्षमताको पनि विकास गरिदिन्छ ।